आज अमेरिकी डलरसहित रियाल, रिंगिट लगायतका विदेशी मुद्राको भाउ घट्यो | Makalukhabar.com
काठमाडौं, १ जेठ । आज बुधबार अमेरिकी डलरसहित रियाल, रिंगिट, दिर्हाम लगायतका विदेशी मुद्राको भाउ घटेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज एक अमेरिकी डलरको खरिददर ११२ रुपैयाँ ४० पैसा र बिक्रीदर ११३ रुपैयाँ तोकेको छ । हिजो खरिददर ११२ रुपैयाँ ५६ पैसा र बिक्रीदर ११३ रुपैयाँ १६ पैसा थियो ।
आज कतारी रियाल १ को खरिददर ३० रुपैयाँ ७२ पैसा र बिक्रीदर ३० रुपैयाँ ८९ पैसा तोकिएको छ । हिजो खरिददर ३० रुपैयाँ ९१ पैसा र बिक्रीदर ३१ रुपैयाँ ०८ पैसा तोकिएको थियो । यस्तै साउदी रियाल १ को खरिददर २९ रुपैयाँ ९७ पैसा र बिक्रीदर ३० रुपैयाँ १३ पैसा छ । हिजो खरिददर ३० रुपैयाँ ०१ पैसा र बिक्रीदर ३० रुपैयाँ १७ पैसा थियो ।
यूएई दिर्हाम १ को खरिददर ३० रुपैयाँ ६० पैसा र बिक्रीदर ३० रुपैयाँ ७६ पैसा छ । हिजो खरिददर ३० रुपैयाँ ६४ पैसा र बिक्रीदर ३० रुपैयाँ ८१ पैसा रहेको थियो । बुधबार मलेसियन रिंगिट १ को खरिददर २६ रुपैयाँ ९५ पैसा र बिक्रीदर २७ रुपैयाँ १० पैसा छ । हिजो खरिददर २७ रुपैयाँ ०३ पैसा र बिक्रीदर २७ रुपैयाँ १७ पैसा थियो ।
बहराइन दिनार १ को खरिददर २९८ रुपैयाँ २७ पैसा र बिक्रीदर २९९ रुपैयाँ ८६ पैसा छ । हिजो खरिददर २९८ रुपैयाँ ५६ पैसा र बिक्रीदर ३०० रुपैयाँ १५ पैसा थियो । यस्तै आज कुवेती दिनारको १ को खरिददर ३६९ रुपैयाँ ४५ पैसा र बिक्रीदर ३७१ रुपैयाँ ४२ पैसा तोकिएको छ । हिजो खरिददर ३६९ रुपैयाँ ९५ पैसा र बिक्रीदर ३७१ रुपैयाँ ९२ पैसा थियो ।
कोरियन वन एक सयको खरिददर ९ रुपैयाँ ४६ पैसा र बिक्रीदर ९ रुपैयाँ ५१ पैसा रहेको छ । हिजो खरिददर ९ रुपैयाँ ४८ पैसा र बिक्रीदर ९ रुपैयाँ ५३ पैसा थियो ।
Exchange Rate for 15 May 2019
आफ्नै घरमा पालेको गोरुले लियो श्रेष्ठको ज्यान
विषादी परीक्षण बिनै भारतीय तरकारी र फलफुल खुलेआम बजारभरी, सर्वाेच्चकाे आदेश थाहा छैन
साउन ६, विराटनगर । प्रदेश नं. १ का जनता अझै विषादी युक्त तरकारी खान बाध्य हुँदै आएका छन् । सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश वेवास्ता गर्दै भन्सार कार्यालयले विषादी परीक्षण विनै फलफुल तथा तरकारी आयात गर्न दिएपछी प्रदेश नं. १ का जनता अझै पनि विषादी युक्त फलफुल तथा तरकारी खान बाध्य भएका हुन् । भारतबाट मासि... जारी राख्नुहोस...
शेयर बजारमा सामान्य अङ्ककाे बृद्धी
साउन ६, कठमाडौं । धितोपत्र बजारमा शेयर कारोवार मापक नेप्से परिसूचक आज सामान्य अङ्कले उकालो लागेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार नेप्से परिसूचक २.४८ विन्दुले बढेर एक हजार २७१.२३ विन्दुमा पुगेको छ । यस्तै ठूला कम्पनीको शेयर कारोवार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक ०.१९ विन्दुले बढेर २७३.५० मा पुगेको... जारी राख्नुहोस...
कालो धनको छानविनमा तानिए सांसद केसी
साउन ६, काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद सूर्यबहादुर केसी कालोधनको छानविनमा तानिएका छन् । जीवनको लामो समय राप्रपासँग नजिक रहेर राजनीति गरेका केसी पछिल्लो समय कांग्रेसमा प्रवेश गरेका थिए । व्यापारिक पृष्ठभूमिका केसी माछापुच्छ«े बैंकको संस्थापक समेत हुन् । उनै सांसद केसीम... जारी राख्नुहोस...
सुनकाे भाउ ह्वातै घट्यो
साउन ५, काठमाडौँ । घट्ने र बढ्ने क्रम जारी भईरहेको सुनचाँदीको भाउमा आज सुनमा तोलामा ५०० घटेर कारोबार भईरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जानकारी दिएको छ । शुक्रबार सम्म प्रतितोला ६५ हजार ५०० मा कारोबार भईरहेको छापावाल सुन आइतबार तोलमा ५०० घटेर ६५ हजारमा बिक्री बितरण भईरहेको महासंघले जनाएको छ ।... जारी राख्नुहोस...
साउन ४, चितवन । प्रदेश ३ का भुमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री दावा दोर्जे लामाले सहकारीलाई उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी गर्न आग्रह गरेका छन् । चितवनको खैरहनी १ ज्यामिरेको शुभकामना वचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको पर्सामा सेवा केन्द्र उद्घाटन गर्दै मन्त्री लामाले वचतमा मात्रै केन्द्रित नभई उत्पादनका क्... जारी राख्नुहोस...
पाइपलाइनबाट अमलेखगन्ज आइपुग्याे तेल
साउन ३, काठमाडौं । नेपाल भारत क्रसबोर्डर पेट्रोलियम पाइपलाइनमा पहिलो पटक पठाइएको डिजेल अमलेखगन्ज आइपुगेको छ । शुक्रबार बिहान ९ बजे अमलेखगन्ज डिपोमा एक हजार लिटर डिजेल खसाइएको डिजेल १८ घन्टापछि बिहीबार साँझ ६ बजे नेपाल आयल निगमको बारास्थित अमलेखगन्ज डिपोमा आइपुग्ने निगमको अमलेखगन्जस्थित डिपो प्रमुख... जारी राख्नुहोस...
आज अमेरिकी डलरसहित बढ्यो विदेशी मुद्राको भाउ
काठमाडौं, ३ साउन । आज शुक्रबार अमेरिकी डलरसहित, रियाल, रिंगिट, दिर्हाम लगायतका सबै विदेशी मुद्राको भाउ बढेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार एक अमेरिकी डलरको खरिददर ११० रुपैयाँ ०३ पैसा र बिक्रीदर ११० रुपैयाँ ६३ पैसा तोकेको छ । हिजो खरिददर १०९ रुपैयाँ ८० पैसा र बिक्रीदर ११० रुपैयाँ ४० पैसा तोकेको थ... जारी राख्नुहोस...